Mozilla Firefox, ihe nchọgharị zuru oke maka ndị na-agụ akwụkwọ | Ndị niile na-agụ akwụkwọ
Joaquin Garcia | | ndị na-agụ akwụkwọ, Mgbanwe, software
Site na ígwè obibi akwụkwọ nke Gutenberg rue mgbe mmalite nke eReaders na mbadamba, ndị na-agụ akwụkwọ ọgụgụ dị ole na oleAgbanyeghị, na okike na mmepe nke eReaders ọnụ ọgụgụ ha toro nke ukwuu. Na nso nso a Ntọala Mozilla weputara mbipute ọhụrụ na ihe nchọgharị gị gbakwasara ọtụtụ ndị na-agụ. Versiondị ọhụrụ a na-agụnye ọrụ ọhụrụ dịka onye na-ekiri maka ịgụ ma ọ bụ ohere ịchekwa ọgụgụ anyị ka anyị nwee ike ịgụ ha ma emechaa. Nsogbu banyere ụdị ọhụrụ a nke Mozilla Firefox bụ na ọ bụ naanị maka ngwaọrụ mkpanaka, yabụ ọ naghị arụ ọrụ ugbu a na desktọọpụ nsụgharị nke ihe nchọgharị a ma ama.
Kedu ihe ụdị nke Mozilla Firefox a na-eweta?
Ọ bụrụ na ị na-eji mbadamba nkume iji gụọ ebook gị, ma ọ bụ na ị na-eji ya, yana ekwentị gị, ị nwere ike iji Mozilla Firefox, ihe nchọgharị a etinyela atụmatụ ndị na-adọrọ mmasị na nsụgharị ọhụrụ ya. Nke mbụ n'ime ha niile bụ ohere nke nchọgharị na-agụ mode maka ederede weebụ ma ọ bụ nnukwu ederede nke ibe weebụ. Rụọ ọrụ ọnọdụ a dị mfe, naanị na anyị ga-pịa akara ngosi akwụkwọ mepere emepe nke pụtara na ogwe igodo.
Ozugbo anyị nọ n'ọnọdụ a, Firefox na-enye anyị ohere ịhazigharị ederede dịka anyị chọrọ: anyị nwere ike ịgbanwe font, tinye ya n'ọnọdụ abalị, gbanwee font size, line spacing, justification, etc.….
Ọ na-enyekwa anyị ohere ịchekwa ọgụgụ ka anyị nwee ike ịgụ ya ma emechaa ma ọbụghị n'ịntanetị; ozugbo anyị zipụrụ ederede ahụ (web ma ọ bụ isiokwu) iji gụchaa, ọ bụrụ na anyị chọrọ ịgụ ya naanị anyị ga-emepe Firefox wee chọta ndepụta ọgụgụ. Taabụ a na-egosi n'akụkụ ibe edokọbara ndị a kacha elele ma ọ bụ ibe weebụ ndị na-egosi n'okpuru ihuenyo ụlọ nke Mozilla Firefox.
Mana nke a abụghị naanị ihe ụdị nke Firefox maka ngwaọrụ mkpanaka na-eweta. Ihe omuma ohuru nke o webatara maka ufodu nsụgharị bu ohere nke itinye ihe ndi ozo nke nwanne ya nwoke nke okenye na nhuputa na onodu desktọọpụ. Nke mbụ bara ezigbo uru ebe ọ bụ na ọ na-enye anyị ohere iji adblok gbakwunyere, ihe mgbakwunye nke ga-ewepu mgbasa ozi iwe, a ga-eme ka igodo na ịgụ ihe na ngwa ekwentị kawanye mma. Nke abụọ ga-enyere anyị aka ịhụ ibe weebụ dịka a ga - asị na anyị na - ahụ ya na desktọọpụ anyị. Amaara m na ọ baghị uru, mana enwere ọtụtụ ibe weebụ nke ụdị mkpanaka ha na-ewe iwe karịa nsụgharị desktọọpụ. Ọnọdụ a ga-enyere anyị aka iwepụ echiche ndị ahụ na-adịghị mma, maka oge ahụ.
Dị ka ị hụrụ, Mozilla Firefox Ọ bụ ezigbo ihe nchọgharị weebụ maka ngwaọrụ mkpanaka na ndị na-agụ akwụkwọ na-emegharị emegharị, ọkachasị ma ndị nke ikpeazụ jiri nke mbụ wee nweta njedebe ha. Ihe ọghọm nke ihe a niile bụ na ugbu a enweghị eReader na ihe nchọgharị a, mana ọ bụ naanị oge, ebe ọ bụ Mozilla Firefox Ọ bụ ihe nchọgharị mepere emepe na ihe anyị ga-enwe ike ịnweta maka eReader ọ bụla.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Ndị niile na-agụ akwụkwọ » Hardware » ndị na-agụ akwụkwọ » Mozilla Firefox, ihe nchọgharị zuru oke maka ndị na-agụ akwụkwọ
Njikọ ma ọ bụ ihe odide ala ala peeji?